TogaHerer: WAA SIDEE XAALADA DUGSIGA HOOSE DHEXE EE M. AXMED CALI BURCO +WARAYSI LAGA SOO QADAY MAAMULAHA DUSIGAASI.
WAA SIDEE XAALADA DUGSIGA HOOSE DHEXE EE M. AXMED CALI BURCO +WARAYSI LAGA SOO QADAY MAAMULAHA DUSIGAASI.
Waa side xaalada iyo jawig guud ee Dugsiga H/dhexe ee mohamud ahmed ali + waraysi anu la yeelanay Mamulaha Dugsigaasi
Marka aad maqasho magaca maxamuud axmed cali maxaad dareemaysaaa oo maskaxdaada ku soo dhacaya?
Waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya Aabihiiii waxbarashada ee gayiga somalida ee geeska Africa iyado iskuulka maxamuud axmed cali oo ka mid ah iskuulada ugu da’da wayn ee magaaladda Burco uguna ardayda badan ayaanu manta booqaso rasmi ah kutagnay iyadoo xiligiii aanu booqanaynay Dugsiga oo goor subaxa ahayd ay socdeen xiisadihii caadiga ahaa iyadoo iskuulkuna ahaa mid mashquul badani ka muuqday, Hadaba intii aanu halkaas kusugnayn waxaan lakulanay masuuliyiinta iskuulka, masuuliyiintaas aanu lakulanay waxaa kamida ahaa maamulaha iskuulka siciid ibrahim cali iyo weliba macaliimiinta iskulka qaar ka mid ah.
iskuulka oo ah mid bilicsan oo ay kubeeran yihiin dhir farabadan oo markaad gashid aad jeclaysanayso inaad inaad xoogey kudhex negaato ayaa jawigiisa guud uu ahaa mid caadi ah,
Hadaba Booqashadan aanu saaka booqanay Dugsiga H/dhexe ee Maxamud Axmed Cali ayaa ahaa mid aanu ugu kuur galaynay xaaladda waxbarasho iyo xaaladda Guud ee Dugsiga. iyadoo aanu waraysi Dhinacyo badan taabanaya la yeelanay Maamulaha Dugsigaaso Siciid Ibraahin Cali.
iyadoo sida uu maamuluhu noo xaqiijiyey Iskuulka ay wax dhigaan
inkabadan 12 macalin oo badankoodu ka soo baxay kulliyadii macaliniimta ee lafoole .
Iskusoo wada duuboo iskuulka mohammuod ahmed ali ayaa ayaa ah mid aad uga duwan marka loo eego iskuulada kale ee dowliga ah ee gobalka togdheer dhinacyo faro badan.
Hadaba maamulaha oo aanu waraysi dheer ka soo qaadnay ayaa waxa uu dhacay waraysigiina sidan:
S-Marka hore maamule bal nooga waran sida iskuulka howshiisu usocto iyo waliba inta fasal ama galas ee uukaboonyahay ISkuulku?
J-Howsha iskuulku isfiican ayey usocotaa waanad aragtaan ayaan umalaynayaaaa oo xiisadihii ayaa socda iskuulkuna wuxuu kaboonayahay Dhowr iyo Toban Galaas, 11 Galaas ayaa hadana wax lagu dhigtaa
S-Waayahay, Maamule Goorma ayaa la aasaasay Iskuulka, immisa Dufcadood ayaa se ka baxay iskuulka intii uu jirey?
J- lskuulkan waxa la aasaasay 1970 kii waxaana kaqalin jabiyey amaba kabaxay 11 dufcadood kuwaaso welibana dhowr jeer noqday ardaydii ugu sarsareysay Somaliland .
S- Yaa gacan idinka siiya dhanka agabka iyo kharashaadka kale ee iskuulka innagoo og weliba inu iskulku yahay mid Dawli ah?
J- waa run iskuulkani mid dowli ah waxaana dhanka agabka iyo kharashkaba gacan naga siiya wasaarada waxbarashada jsl iyo hay,ado kale oo waxbarasho.
s: maamul intee ayaad maamule ka ahayd adigu Dugsiga?
j:waxaan maamule ka ahaa dusigan mudo 8 sano ah
S- waa hagaag, maamule intii aad maamulaha ka ahayd dugsiga wixii Kuugu farxada badnaa ee ku soo mara wax ma noga sheegi kartaa ?
j: kkkkk haah waxyaabihii igu farxada badnaa ee isoo mara waxa ka mid ahaa sadex sanad dugsiyeed oo aanu ugu saraynay oo laba jeer aanu tobanka arday ee s/land ugu sareya helnay mararkaas ama sannadadaas aya iigu farxad badnaa.
S: maamule maxaad u malaynaysaa in uu dugsigan maxamuud axmed cali kaga duwan yahay dugsiyada kale?
j:waxaan u malaynaya in uu kaga duwan yahay xaga bilicda oo ah meel leh dhir aad u fara badan oo aanay la hayan dugsiyada kale tusaale ahaan dugsigan waxa ku yaalla 26 Geed oo mirimiri ah iyo 11 geed oo baxarasaf ah 37 geed weeye isu gayn dhir baanu haysaan kulayl iyo qabow ba intaasiba waa wax lagu faano oo anu iskuulada kale dheernahay.
S: Ardayda dhigata dugsigu waa imisa, macalimintu iyana waa imisa ?
J: ardayda dugsiga dhigataa waa 715 arday macalimintuna waa 13 macalin.
S: Markaa fasalada aad wax ku dhigtaan wax caqabado ahi ma idinka haystaan, weliba waxaad haysataan barxad aad u wayn markaa wasarada ma la xidhiidhen si ay fasalo cusub idiinku dhisaan?
J: haa waanu la xidhiidhnay hadii aan tusaale ku siiyo markii dalka la soo galay dugsigu wuxuu ahaa 9 fasal iyo 1 office markaa ayagaa ku soo kordhiyay fasaladan kale, kuwo kalena way ku soo kordhin doonan.
J: maamule macaliminta dugsiga wax ka dhigaa ma macalimiin heer jaamicadeed ahbaa mise waa macalimiin secondery ka soo baxay?
J: macalimiintu labo ayay u qaybsantaa macalimin lagu tababaray macalinimada iyo macalimin dhiga secondery ga markaa kuwani waa kuwii la tababaray.
S: maamule ma jirtaa ardaydii ka qalin jabisay dugsiga cid macalimiin ka ah isla dugsiga oo fursadaasi u soo baxday?
j:may ma jirto.
S-Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maamule siciid ibraahin cali..
waxa warysigan soo qaaday Wariye jamac caqil-cabdi siciid
waana habayntii bahda T I T C Journalism Group
Posted by togaherer at 23:43